Shina · Aogositra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Aogositra, 2017
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Aogositra, 2017
Amerika Latina 28 Aogositra 2017
Hevitra 22 Aogositra 2017
Nikaroka ihany ny mpanomponareo saingy niala maina.. Aiza ary no misy ny olana raha izany?
Fahalalahàna miteny 22 Aogositra 2017
"izao no dingana lehibe indrindra nataon'ny governemanta shinoa hanakanana ny fampiasana ny VPN hatramin'izay, ary talanjona izahay mahita ny Apple manome vahana ny ezaka fanivanana shinoa."
Shina: Nihazona Saina Manoloana Ny Kianja Olaimpika Ny Mpanao Fihetsiketsehana Tibetana
Fahalalahàna miteny 21 Aogositra 2017
Mbola miandry ny antsipirihany bebe kokoa, kanefa ao an-toerana ny bilaogeran-dahatsary Qik.com Noel Hidalgo ary manome fanavaozam-baovao amin'ny alàlan'ny Twitter. Ity misy lahatsary iray izay nalainy minitra vitsy teo aloha tsy lavitra ny tranom-borona Olaimpika :
Fanabeazana 20 Aogositra 2017
Fampandrosoana 19 Aogositra 2017
Nosakanana Tao Shina Ny Fetibe Gala Lohataona Shanzhai
Mediam-bahoaka 19 Aogositra 2017
Ny takarivan'ny 25 janoary 2009, tany an-trano ny ankamaroan'ny Shinoa ao amin'ny tanibe Shina, mankafy ny taona sy sakafo hariva teo am-piandrasana ny Taombaovaon'ny Volana. Fialam-boly mahazatra amin'ny alina eo anivon'ny fianakaviana ny mijery ny Fetibe Gala Lohataona alefan'ny CCTV. Tamin'ity taona ity, afaka nanana safidy izy ireo, na izany aza
Shina: Bilaogera Malaza Voatsatoka Antsy
Adiny roa izay, nitatitra i Zola avy ao amin'ny twitter fa nahazo antso an-tariby avy amin'i Guo Jian-loong milaza fa voatsatoka antsy indroa tao amin'ny trano fivarotam-boky, One Way Street, tao Beijing ilay bilaogera malaza sady mpanoratra tantara Xu Lai ao amin'ny ProState in Flame, rehefa avy nitafatafa tamin'ny vahoaka.
Afrika Mainty 13 Aogositra 2017
Media sy Fanoratan-gazety 13 Aogositra 2017